२० तस्बिरमा हेर्नुहाेस् क्रोएशियाले इतिहास रचेको खेल
खेलकुद : विश्वकप - २०१८
काठमाडौं–इङ्ग्ल्याण्डलाई २–१ ले हराउँदै क्रोएशिया पहिलो पटक विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मस्कोस्थित लुज्नुकी रंगशालामा सम्पन्न रोमाञ्चक खेलमा क्रोएशिलाले ऐतिहासिक जित दर्ता गराएको हो ।
निकै रोमाञ्चक खेलमा इङ्ग्ल्याण्डले पाचौं मिनेटमै गोल गर्दै अग्रता कायम गरेको थियो तर खेलको ६८ औं मिनेटमा क्रोएशियाले बराबरी गोल गर्न पुग्यो । त्यसपछि ९० मिनेटको समयमा कुनै गोल हुन नसकेपछि खेल अतिरिक्र समयमा धकेलिएको थियो । अतिरिक्त समयको १०९ औं मिनेटमा क्रोएशियाका मारियोले गोल गरेसँगै इङग्ल्याण्ड सेमिफाइनलबाटै घर फर्किन बाध्य भयो । यसअघि इङ्ग्ल्याण्डको लागि खेलको पाँचौं मिनेटमा ट्रिपियरले गोल गरेका थिए भने ६८ औं मिनेटमा क्रोएशिका इभानले बराबरी गोल फर्काएका थिए ।
अब आइतबार क्रोएशियाले उपाधिका लागि फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
यी चार कारण जसले गर्दा मेस्सीले खेल्न सकिरहेका छैनन्
इतिहासले भन्छ - समूहको १ खेलमा हार वा बराबरी खेल्ने टीम नै विश्वकप विजेता !
अर्जेन्टिनी टीममा आमूल परिवर्तनको खाँचो : यसरी फर्किनसक्छ शक्ति !
मेस्सी एक्लैले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप जिताउन सक्दैनन्
विश्वकप फूटबल प्रिभ्यु : जर्मनी फेरि च्याम्पियन बन्ने सम्भावना कति ?
विश्वकपमा होला मेस्सी र रोनाल्डोको भिडन्त ? यस्तो छ सम्भावना
कारागार हातामा मन्दिर, गर्नेछन् कैदीबन्दीले पूजापाठ दैलेख– जिल्ला कारागार दैलेख हातामा सरस्वतीको मन्दिर निर्माण गरिएको छ । गएको तिहारमा कारागारभित्रै देउसीभैलो खेलेर जम्मा भएको १२ हजार रुपैयामा मूर्ति ल्याएर पूजा गर्ने कैदीबन्दीको अव...
निगमको विमान चार्टर गरेर चीन जाँदै राष्ट्रपति, चार्टर नै गरिएको गणतन्त्रपछि यो पहिलो पटक
एकता टुंग्याउन नेकपाका नेताहरु अन्तिम कसरतमा, कसरी मनाइएला माधव नेपाललाई ?
बर्सेनि नेपालमा चट्याङबाट हुन्छ १०० बढीको मृत्यु
सम्झनामा २००१ सालमा नेपालमा भएको त्यो पहिलो विमान दुर्घटना